Ọrụ Franchises maka Ọre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franchises Ọrụ
Banyere Pink Spaghetti Pink Spaghetti Franchising bụ nke 2012 ka Caroline Gowing na Vicky Matthews guzobere, na-eso afọ atọ gara nke ọma…
Bridgewater Home elekọta aha ga-enye gị ohere iji wuo azụmahịa nke gị nke ọma na-eto ngwa ngwa, mgbe…
Nchọpụta nchọpụta Dampine Franchise Ohere nyocha a ka Robert Horne malitere na 2009. Inye nyocha na mkpocha mmiri maka…
Enyemaka franchuresafe Franchise - Akwụ ụgwọ & Akwụ ụgwọ naanị ngwugwu iji chekwaa ikikere nna ukwu maka obodo na-arụ ọrụ site na…
Franchises Ọrụ kacha ọhụrụ
Shoplọ ahịa Nleba Anya Autobrite Direct
The Autobrite Direct Franchise Nnabata gị Autobrite Direct Mobile shop Franchise, ohere ọhụụ na-akpali akpali iji mee ka…
Banyere Pink Spaghetti Pink Spaghetti Franchising e guzobere 2012 site Caroline Gowing na Vicky Matthews, na-eso afọ atọ gara nke ọma ...
Robert Horne malitere na Dọkịta Nchọpụta Dọkịta Mkpebi Franchise Dọkịnta 2009. Na-enye nyocha na mkpo mmiri maka…
Bridgewater Homecare aha
Bridgewater Home franchise ga-enye gị ohere iji wuo azụmahịa gị nke na-aga nke ọma na ngwa ngwa na-eto, mgbe ...
Ọrụ Fantastic Franchise
Soro Fantastic Services wee bido azụmaahịa ụlọ na mpaghara ị họọrọ Fantastic Services bụ ụlọ ọrụ ụwa niile, ...
PunctureSafe Franchise maka ọrịre - Nchekwa Taịa zuru ezu
Nleta Puncturesafe Franchise - Akwụ ụgwọ & Azụmaahịa naanị ngwugwu iji chekwaa ikike ikikere nna ukwu maka obodo na-arụ ọrụ site na…
Ọchịchọ maka ọrụ onwe onye mba ụwa adịbeghị elu karịa. Yabụ na ụlọ ọrụ na-abawanye mma, ị nwere ike ịtụle ịzụrụ ọrụ metụtara ọrụ ohere ọ bụla.
Kedu ụdị ọrụ franchise ndị dị?
Anyị nwere ọtụtụ ọrụ aka nke aha dị na Franchiseek gụnyere nhicha nhicha, njikwa mbugharị ya, ntuliaka ndozi ụlọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Yabụ, anyị ga - edepụta ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ngwa ngwa ndị a iji nye gị nghọta dị omimi banyere uto ha.
Mmecha nhicha: Lọ ọrụ nhicha ahụ anọwo na-agbago ngwa ngwa na ngalaba ọrụ onwe onye ruo ọtụtụ afọ ugbu a gafee ọtụtụ mba. N'afọ ndị gara aga, UK dị ka ọmụmaatụ, enweela ịrị elu kwụ ọtọ maka ọrụ ndị dị ka ndị a.
Kemgbe 2010, ngalaba nhicha ahụ ahụla ihe na-abawanye nke 21% na UK naanị.
Enwere naanị ụlọ ọrụ karịrị puku abụọ na puku iri abụọ na UK na-enye nhicha ụlọ dịka nhicha ọfis wdg.
Onu ogugu ahia nke di na UK bara uru ruru £ 6 ijeri Britain.
Mmezi Nlekọta: Site na atụmanya ndụ na-abawanye n'ihi ọrụ ebube nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ nwere ike iyi ihe dị mma. Mana nke a pụtakwara na ndị agadi ga-achọ enyemaka na nlekọta karịa ya mere nke a mere ụlọ ọrụ nlekọta ji abawanye ụba.
Industrylọ ọrụ na-ahụ maka nlekọta na-ewetara akụ na ụba UK ihe ruru ijeri $ 7.8 kwa afọ
Officelọ ọrụ maka National Statistics buru amụma na mmadụ ga-etolite afọ 36% n'agbata afọ 85 na 2015, site na nde 2025 ruo nde abụọ.
Na 2018 naanị ihe karịrị nde mmadụ asaa ebe ha na-arụ ọrụ na ngalaba nlekọta na US naanị
Industrylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Homelọ: Anyị niile maara na anyị hụrụ ụlọ anyị n'anya zuru oke ọ bụ ya mere anyị ji etinye oge na ego na nhicha yana arịa ụlọ ọhụụ iji mee ka ọ dị mma mana ị maara?
Dabere na NAEA anyị ji ihe karịrị £ 41 ijeri mmezigharị ụlọ n'ime afọ ise gara aga na UK.
$ 394B. mkpokọta mma ulo ahịa na US na 2018.
$ 680B. amụma ego maka DIY mma ulo ahịa n’afọ 2025.
Kedu ihe nke a na-egosi maka ngalaba ọrụ?
Dịka ị hụrụ site n'ụkpụrụ ndị a, ọrụ ndị a na ọgwụgwọ ndị a niile na-enye aka na mpaghara ọrụ zuru ụwa ọnụ. Yabụ dịka ị ga - ahụ site na azụmaahịa ndị a niile na - enye aka na ngalaba ọrụ zuru ụwa ọnụ na - etowanye nke ukwuu nke na - egosi na nke a bụ nnukwu ohere na ụlọ ọrụ na - akpali akpali isonyere. Yabụ kedu ihe ị na-eche? Chọgharịa ụfọdụ ọrụ franchise na Franchiseek taa iji chọta ohere nrọ gị.
Banyere VR Simulators VR Simulators bụ nke hiwere na 2017 ma guzosie ike dị ka Europe nke izizi 5D gbagoro agbago na isi ike nke…
Na-agba ọsọ Hotel Hotel nke Gị na EasyHotel! Anyị na ndị faransa na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nyere ha aka ịkwado ụkpụrụ dị elu nke ọrụ na ọrụ anyị. Ọrụ Nchịkwa…
OTU HALAL GLOBAL -'SB FIRSTRAL ALBARA MAKA ALBALRAL FIRSTB FIRSTR FIRST WORLDB FIRSTR The RBARA Halal maka ndị Alakụba na ndị na-abụghị ndị Alakụba…
Chọpụta ọdịnihu nke ịkwọ ụgbọ ala E guzobere maka ihe karịrị afọ iri na atọ, anyị na-enye aka ịkwọ ụgbọ ala na ọrụ ndị…
Foto nwa amụrụ ọhụrụ Franchise na Nyocha ndị Ahịa Nlekọta Ahịa na 6. Ihe ị ga - enwetara ebumnuche gị na InvestmentProven…
E guzobere GoCruise & Njem ihe karịrị afọ iri asaa na asaa ma na-enyekwa ezigbo usoro azụmahịa na-enye gị ohere…